Tsy Mahalala Tsara Siderodromophobia | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Tsy Mahalala Tsara Siderodromophobia
Tsy Mahalala Tsara Siderodromophobia
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 29/03/2020)
Mety ho nandeha pahasalamana ho an'ny sasany; while the same could lead to a lot of phobias for others. People who like traveling will probably even looking at their fiaran-dalamby seza famandrihana fa ny Travel, ary azo antoka fa mandeha.
Inona no atao hoe Siderodromophobia?
Ny ankamaroan'ny mpandeha an-tserasera mijery ny fiaran-dalamby seza famandrihana; Aleon'ny hafa kosa fotsiny raha mandeha amin'ny fizotran'ny, ary hanana ny fiaran-dalamby seza famandrihana natao izay ary rehefa ilaina Arakaraka ny toerana misy izy ireo dia manaraka. Misy ihany koa ny fiaran-dalamby mifandraika amin'ny phobias fa mijaly ny olona sasany avy amin'ny. Ny fahatahorana ny fiaran-dalamby dia fantatra amin'ny anarana hoe Siderodromophobia. Siderodromophobia dia tena malalaka teny izay manenika ny tahotra na ny phobias mifandraika amin'ny fiaran-dalamby. Ny tena karazana olona hihorohoro mihitsy fa indrindra indrindra dia ny tahotra manarona ny olona manana ny hatao nianjera na tsia na dia nanana fanaraha-maso. Hafa noho izany, misy hafa koa izay mahazo Niteraka tahotra ny olona rehefa eo amin'ny fiaran-dalamby. Hisy tahotra izay mikraoba hihorohoro mihitsy, ara-tsosialy na hihorohoro mihitsy claustrophobia.
Siderodromophobia dia miorina amin'ny maro samy hafa phobias. koa, arakaraka ny fomba toe-javatra mafy ny dia. Tsy mety ho soritr'aretina toy ny fo palpitations, tsemboka, shaking or gastrointestinal symptoms. Ho an'ny olona sasany, ny toe-javatra atao aloha na dia ela be talohan'ny fiaran-dalamby dia manomboka. Izany no tena miresaka amin'ny zavatra izay fantatsika amin'ny hoe ny fanahiana anticipatory. Anticipatory fanahiana mety hiteraka olana ratsy kokoa noho ny tena hihorohoro mihitsy mihitsy. Ny ankamaroan 'ny fotoana ny antony dia noho ny fahatahorana ny ratsy mifandray amin'ny zava-nitranga fa ny olona efa niatrika, izay any mifandray amin'ny fiaran-dalamby. Misy mila mahatakatra eto fa ny ratsy traikefa izay mifandray ao an-tsainao dia tsy voatery voatery ho zavatra izay nanjo anao. Mety ihany koa ho zavatra izay mety ho nitranga ny olona na zavatra iray hafa izay afaka nahita manodidina antsika na eo amin'ny olona, ​​na amin'ny haino aman-jery.
Rehefa nifarana ny andro, fa tsy zava-dehibe fa ny tahotra misy; zava-dehibe ny fomba hiatrehana ny tahotra sy manao ezaka mba manala ny tahotra izay nanao toerana eo amin'ny fiainanao. Rehetra ny phobias, Siderodromophobia na ny fiaran-dalamby hihorohoro mihitsy no tena mora azo tsaboina tsara, ary nampiseho tsara tahan'ny fahombiazana, rehefa tsaboina. Mba hesoriny izay hihorohoro mihitsy, ny dingana izay tokony ho raisina raha miasa amin'ny Voalohany hatao manaisotra ny ratsy rehetra eritreritra hatrany fiarandalamby miahiahy. koa, ny olona miaraka amin'ny hihorohoro mihitsy dia mila miasa amin'ny fanovana ny na ny fihetsika mifandraika amin'ny fiaran-dalamby. Rehefa nifarana ny andro ny zavatra izay mateza ary azo ferana amin'ny alalan'ny fiahiana sy fitsaboana araka ny tokony.
Leave your fear behind and Order Mampiofana ny tapakila avy amin'ny Save A Train
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary fotsiny hanome voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/knowing-siderodromophobia/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#siderodromophobia fiarandalamby fiaran-dalamby Travel torohevitra travelfear